တစ်ပတ်လျှင်7ကီလိုဂရမ်ကျစေနည်း - အခြေခံစည်းမျဉ်းများနှင့် အစားအသောက်များ | တရားဝင် site KETO Complete
တစ်ပတ်မှာ ၇ ကီလိုဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင့်ပုံသဏ္ဍာန်ကို စီစဥ်ထားရန် အရေးတကြီး လိုအပ်ပြီး ထိုအပိုပေါင်များကို ဆုံးရှုံးစေသည့်နည်းဖြင့် အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။အလွန်အမင်း ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကြီးမားသော ဖိစီးမှုတစ်ခု ဖြစ်သောကြောင့် ပါးလွှာခြင်းအတွက် သင့်ကျန်းမာရေးကို မမေ့ရန် အရေးကြီးပါသည်။တစ်ပတ်ကို7ကီလိုဂရမ်ကျဖို့ အကြံပြုထားတဲ့ အစားအသောက်မျိုးစုံရှိပါတယ်။သို့သော်အပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်ကိုရရှိရန်နှင့်သင့်ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်စေရန်အတွက်၊ အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာရန်၊ သင့်ကျန်းမာရေးကိုစောင့်ကြည့်ရန်၊ အစားအသောက်များနှင့် contraindications များ၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။သင့်ဆရာဝန်နှင့် ကြိုတင်တိုင်ပင်ရန်လည်း အကြံပြုထားသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခန္ဓာကိုယ်သည် လျင်မြန်စွာ ကိုယ်အလေးချိန် ကျသွားတတ်ပါသည်။
တစ်ပတ်လျှင်7ကီလိုဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်အတွက် အစားအသောက်သည် ပိုလျှံနေသောကိုယ်အလေးချိန်ကို ဖယ်ရှားရန် အရေးပေါ်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ဒါပေမယ့် ဒီလိုနည်းလမ်းတွေကြောင့် တစ်နေ့ကို အဆီတစ်ကီလိုဂရမ် ဆုံးရှုံးမယ်လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ခန္ဓာကိုယ်အဆီဆုံးရှုံးမှုနှေးကွေးသည် - တစ်ပတ်လျှင် 0.5ကီလိုဂရမ်ခန့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်၊ အစာရှောင်နေစဉ်အတွင်း အဆီလောင်ကျွမ်းမှု လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းသည် အူလမ်းကြောင်းတွင်ပါဝင်မှု၊ ရေမျှတမှုအတက်အကျနှင့် ကြွက်သားထုထည်ဆုံးရှုံးမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
အစာရှောင်ခြင်း၏ အခြေခံသည် ကယ်လိုရီနှင့် အစားအသောက်ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သည်။သေးငယ်သော အစာစားခြင်းသည် အူအတွင်းရှိ အစာကြေညက်မှု နည်းပါးစေပါသည်။သာမာန်အစားအစာဖြင့် ကီလိုဂရမ်များစွာ သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။အစာပမာဏနည်းခြင်းကြောင့် အစာအိမ်သည် ဆန့်ထွက်မှုနည်းလာပြီး လူသည် ပိုမိုပါးလျလာသည်။
ကိုယ်အလေးချိန် အမြန်ကျစေသော အစားအစာများသည် ရေဓာတ်ခန်းခြောက်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။၎င်းတို့သည် ခန္ဓာကိုယ်မှ အရည်များနှင့် အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် ဆားအသုံးပြုမှုကို မကြာခဏ ဖယ်ထုတ်ထားသည်။ခန္ဓာကိုယ်က ရေ 60% လောက်ပါ၀င်ပြီး ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရည်တွေက သင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျလာပါလိမ့်မယ်။
အစာရှောင်နေစဉ်အတွင်း ကိုယ်အလေးချိန်ကျရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ အစားအစာမှ အာဟာရဓာတ်များ ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်က စွမ်းအင်ပေါင်းစပ်မှုအတွက် စတင်အသုံးပြုသည့် ကြွက်သားထုထည် ဆုံးရှုံးခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
တစ်ပတ်လျှင်7ကီလိုဂရမ်ရှိသော အစားအစာသည် အစားအစာများစွာကို အသုံးပြုခြင်းကို ပြင်းထန်စွာတားမြစ်ထားသည်။ကိုယ်အလေးချိန် မြန်မြန်ကျစေသည့် ပြဿနာမှာ ဆုံးရှုံးသွားသော ပေါင်များ လျင်မြန်စွာ ပြန်တက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ယင်းကို ကာကွယ်ရန် ခုနစ်ရက်စာ လုံလောက်မှု မရှိပါ - ပုံမှန် အစားအသောက်သို့ ချောမွေ့စွာ ကူးပြောင်းပြီးနောက် အနည်းဆုံး နောက်ထပ် ၁၄ ရက် သုံးစွဲရန် လိုအပ်ပြီး ကျန်းမာသော အစားအသောက် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာပါ။မဟုတ်ရင် ကိုယ်အလေးချိန် ပြန်တက်လာမယ်၊ မင်းရဲ့ကြိုးစားမှုတွေအားလုံး အချည်းနှီးဖြစ်လိမ့်မယ်။
ကိုယ်အလေးချိန် အမြန်ချတဲ့အခါ လိုက်နာရမယ့် စည်းကမ်းများ
ခန္ဓာကိုယ်၏ကျန်းမာရေးကိုယုံကြည်မှုရှိပါ (အားနည်းခြင်း၊ ဝေဒနာများ၊ နာတာရှည်ရောဂါများပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်း၊ အမြန်အစားအစာကိုသင်မသုံးနိုင်ပါ။
သကြား၊ အဆီ၊ အစာကြေလွယ်သော ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်များစွာပါဝင်သော အမှိုက်များကို ဖယ်ထုတ်ပါ။၎င်းတို့သည် muffins၊ pastries၊ အမြန်အစားအစာ၊ အဆီများသောအသားများနှင့်ငါးများ၊ အရက်။အပြင် ကာဗွန်နိတ်အချိုရည်များ၊ ငံပြာရည်များ၊ ketchup၊ အဆင်ပြေသောအစားအစာများ စသည်တို့။
ဆားစားသုံးမှုကို ငြင်းပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှော့ချခြင်း (၎င်းသည် ခန္ဓာကိုယ်မှ အရည်များကို ဖယ်ရှားခြင်းကို တားဆီးပေးသည်)။
အစားအသောက်ကာလအတွင်း၊ မကြာခဏ (တစ်နေ့လျှင် ၅-၆ ကြိမ်)၊ သေးငယ်သောအပိုင်းဖြင့်ပုံမှန်စားပါ။
ရေလုံလောက်စွာသောက်ပါ (နေ့စဉ် 1.5လီတာ);
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တက်ကြွစေသော်လည်း ပြင်းထန်သော လေ့ကျင့်ခန်းကို ရှောင်ပါ။
ယိုယွင်းလာသောအခါတွင် ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ထိန်းချုပ်ပါ - အစားအသောက်ကို ရပ်ပါ။
အစားအသောက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဂရုတစိုက်နဲ့ ချန်ထားခဲ့ပါ၊ အမှိုက်အစားအစာကို ပြန်မတိုက်ပါနဲ့။
အမြန်အစားအစာများနှင့် contraindications ၏အားနည်းချက်များ
လျင်မြန်စွာ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တွေအကြောင်း မမေ့ပါနဲ့။အစားအသောက်ကို ပြင်းထန်စွာ ကန့်သတ်ထားခြင်း၊ ပုံမှန်အစားအစာဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ဝင်လာသော အာဟာရဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ လျော့နည်းသွားခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ ဆာလောင်မှု အဆက်မပြတ်ခံစားရခြင်း၊ စိတ်တိုခြင်း နှင့် စိတ်ဖိစီးမှုတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ကယ်လိုရီနည်းသော အစားအစာများကို ပမာဏအနည်းငယ် စားသုံးခြင်းသည် ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို နှေးကွေးစေသည်။ထို့အတွက်ကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် ရပ်တန့်သွားနိုင်သည်။ထို့အပြင်၊ သင်သည် ကိုယ်အလေးချိန်မချမီကထက် ကိုယ်အလေးချိန် ပိုတက်လာနိုင်သည်။လျင်မြန်သော အစားအစာများသည် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို နှောင့်ယှက်နိုင်ပြီး ချွတ်ယွင်းမှုများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ကြွက်သားထုထည် လျော့နည်းသွားပါက အကြောပြတ်ရာများနှင့် အရေပြား လျော့ရဲလာနိုင်သည်။လက်သည်းကွဲခြင်း၊ အရေပြားနှင့် ဆံပင်များ ယိုယွင်းလာခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် ယိုယွင်းခြင်းများသည် အလွန်အမင်း စားသောက်ခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ ဖြစ်သည်။
ဆေးဝါးများသောက်နေပါက ဆရာဝန်နှင့် မတိုင်ပင်ဘဲ အမြန်အစားအစာကို စားသုံးရန်လည်း မအကြံပြုထားပေ။၎င်းတို့သည် သင်ရွေးချယ်ထားသော အစားအစာနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိနိုင်သောကြောင့် အထူးကုနှင့် တိုင်ပင်သင့်သည်။
တစ်ပတ်လျှင်7ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးရန်အစားအသောက်နမူနာများ
၁ပတ်ပဲကျန်တော့တဲ့သူတွေအတွက် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့ ရွေးချယ်စရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်၊ ဆွီဒင်အစားအစာသည် ၇ ရက်အတွင်း ၇ ကီလိုဂရမ်ကိုဖယ်ရှားရန်ကတိပြုသည်။အစားအသောက်မီနူးကို ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ရိုးရှင်းပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိစေသည်ဟု ယူဆပါသည်။
ဆွီဒင်အစားအစာကိုလိုက်နာပါ၊ တစ်ပတ်အတွင်း7ကီလိုဂရမ်ကျအောင်နည်း- နမူနာမီနူး
1st buckwheat အနည်းငယ်၊ နို့တစ်ခွက် ဒိန်ခဲ 100 ဂရမ်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ် (ခရမ်းချဉ်သီး၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ကြက်သွန်နီ) ပူနွေးသောဖျော်ရည်တစ်ခွက် ကောက်မုန့်တစ်ချပ်၊ အချဉ်မုန့်နှင့်အတူ beets 200 ဂရမ်၊ ပြုတ်အာလူးနှစ်လုံး
2nd buckwheat အနည်းငယ်၊ နို့တစ်ခွက် ငါးပြုတ် ၂၅၀ ဂရမ်၊ အာလူးပြုတ် ၂ လုံး။ဆလတ်ရွက်ကို သံလွင်ဆီဖြင့် ဖျော်ပါ။ ကြက်ဥပြုတ်နှစ်လုံး။ဂေါ်ဖီထုပ် နှင့် ကြက်သွန်နီ တို့ဖြင့် အသုပ် ၊ သံလွင်ဆီ ဖြင့် ချက်ပါ။နို့တစ်ခွက်
၃ ကောက်မုန့်တစ်ချပ်၊ ဒိန်ခဲ 60 ဂရမ်၊ နို့တစ်ခွက် လတ်ဆတ်သောပန်းသီးဖျော်ရည်တစ်ခွက်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ်၊ ပြုတ်ထားသောအသားမပါသောကြက်သား 250 ဂရမ် အာလူးထောင်း၊ နို့နွေးနွေးတစ်ခွက်၊ ဒိန်ခဲနဲ့ ကောက်မုန့်တစ်ချပ်
4th ပန်းသီးဖျော်ရည် တစ်ခွက်၊ အိမ်လုပ် croutons နှစ်ခု လိမ္မော်သီးနှင့်အတူပန်းသီး 200 ဂရမ်, buckwheat နှင့်အတူပိန်အသားပြုတ် အသုပ် (ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်ကြက်သွန်နီ, ဆီနှင့်အတူအရသာ), ဆန် 100 ဂရမ်, နို့တစ်ခွက်
၅ ရက်နေ့ အဆီနည်းသောသဘာဝဒိန်ချဉ်၊လိမ္မော် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ လက်ဖက်ရည်၊ အာလူးပြုတ် စုံတွဲ၊ သင်နှစ်သက်ရာ ဘယ်ရီသီး ၁၅၀ ဂရမ် သို့မဟုတ် လိမ္မော်သီးများ၊ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ညှစ်ထားသော ပန်းသီးဖျော်ရည်
၆ ရက်နေ့ ဂျုံပြုတ်၊ နို့တစ်ခွက် အသား၊ ပန်းသီး၊ လိမ္မော် နှင့် အာလူးပြုတ် ၁၅၀ ဂရမ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ် (ဂေါ်ဖီထုပ်၊ သခွားသီး၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ကြက်သွန်နီ)၊ ဆန် 100 ဂရမ်
၇ ရက်နေ့ ဆန်ပြုတ်၊နို့တစ်ခွက် အာလူးပြုတ် 100 ဂရမ်၊ ပြုတ် သို့မဟုတ် ဖုတ်ထားသောငါး 200 ဂရမ်၊ လိမ္မော်သီး၊ ပန်းသီး၊ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ညှစ်ထားသော လိမ္မော်ရည် လတ်ဆတ်သော ပန်းသီးဖျော်ရည်တစ်ခွက်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ်၊ ကောက်ပေါင်မုန့်တစ်ချပ်၊ ကြက်ရင်အုံဖုတ်
အိန္ဒိယအစားအစာသည် လျင်မြန်စွာ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန် ကတိပြုသည်။ရှေးခေတ် အိန္ဒိယလူမျိုးများထံမှ ချေးယူခဲ့သည်။အစားအသောက်မီနူးတွင် ဟင်း သို့မဟုတ် သစ်ကြံပိုးခေါက်ဖြင့် ချက်ထားသော ထမင်း ပါဝင်သည်။ဤအမွှေးအကြိုင်များသည် ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးသောကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေပါသည်။သစ်ကြံပိုးခေါက်သည် အစာစားချင်စိတ်ကို တိုးပွားစေသည်။အစားအသောက်များတွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများ၊ ဂျုံပိုးများ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ ပင်လယ်ရေမှော်များ၊ လက်ဖက်ခြောက်၊ ပူပူနှင့် အေးသော ဟင်းရွက်ဟင်းချိုများလည်း ပါဝင်နိုင်သည်။အိန္ဒိယအစားအစာသည် ၇ ရက်အတွင်း ၇ ကီလိုဂရမ်ကိုဖယ်ရှားသည်။
ပါးလွှာတဲ့ အသွင်အပြင်က နာမည်ကြီးတွေအတွက် အရမ်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ လျှို့ဝှက်ချက်မရှိပါဘူး။ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် ကြယ်များ၏ အစားအစာအချို့ကို သင့်ကိုယ်သင် ငှားရမ်းနိုင်သည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ စူပါမော်ဒယ် Cindy Crawford သည် ဂေါ်ဖီထုပ်ဟင်းချို၏ အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်သော အထူးအစားအစာကို အသုံးပြုသည်။
၎င်း၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်၊ ဂေါ်ဖီထုပ်တစ်ခေါင်း၊ မုန်လာဥနီခြောက်လုံး၊ ငရုတ်ကောင်းနှစ်တောင့်၊ ကြက်သွန်နီနှစ်ခြမ်း၊ အစိမ်းရောင်၊ ခရမ်းချဉ်သီးသုံးလုံး၊ ဆန် ၁/၃ ခွက်နှင့် တရုတ်နံနံငါးပင်တို့ကို အသုံးပြုပါ။အသီးအရွက်များကို လှီးဖြတ်ပြီး ရေဖြည့်ထားသော ဟင်းအိုးထဲတွင် ထည့်ကာ ပွက်ပွက်ဆူအောင် တည်ထားပါ။ဟင်းရည်ပွက်ပွက်ဆူပြီးနောက် ဆန်၊ ကြက်သွန်နီနှင့် တရုတ်နံနံတို့ကို ထည့်ပါ။ပွက်ပွက်ဆူအောင်ဆောင်ခဲ့, မွှေနှင့်ဓာတ်ငွေ့ကိုပိတ်ပါ။ဟင်းရည်ကို 10 မိနစ်ခန့် နှပ်ထားပါ။သူတို့က တစ်ပတ်စာစားတယ်။သဘာဝဒိန်ချဉ် 150 ဂရမ်နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံများကို အကန့်အသတ်မရှိ ပမာဏ စားသုံးရန်လည်း ခွင့်ပြုထားသည်။ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချရန်အတွက် ဤခုနစ်ရက်စာ အစားအသောက်သည် ၄ ကီလိုဂရမ်မှ ၇ ကီလိုဂရမ်အထိ သက်သာစေသည်။
ကြယ်ပွင့်အဆိုတော်တစ်ဦး၏အစားအသောက်ရလဒ်သည်တစ်ပတ်လျှင်7ကီလိုဂရမ်ဖြစ်သည်။၎င်း၏အနှစ်သာရမှာ kefir 500 ml ကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုခြင်းတွင်ဖြစ်သည် (တစ်ကြိမ်တည်းမသောက်သော်လည်းတစ်နေ့တာလုံးအညီအမျှဖြန့်ဝေသည်) ။ဆဋ္ဌမနေ့တွင်သာ kefir မသောက်နိုင်ပါ။kefir အပြင်၊ မီနူးတွင်ပါဝင်သည်-
နေ့ 1: ဖုတ်အာလူး (400 ဂရမ်);
နေ့ 2: အဆီနည်းအိမ်တွင်းဒိန်ခဲ (400 ဂရမ်);
နေ့ 3: သစ်သီး (400 ဂရမ်, ငှက်ပျောသီးနှင့်စပျစ်သီးမှမပါဝင်);
4 ရက်မြောက်နေ့: ဆားနှင့်နံ့သာမျိုးမပါဘဲပြုတ်ကြက်သားလွှာ (400 ဂရမ်);
နေ့ 5: ရက်3ထပ်ခါတလဲလဲ;
နေ့ 6: နေဆဲတွင်းထွက်ရေ 1.5လီတာ;
7 ရက်မြောက်နေ့- 3rd နှင့် 5th နေ့ menus များကိုပြန်လုပ်ပါ။
ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချခြင်းအတွက် နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာမှာ ကီဝီသီး စားသုံးခြင်း ဖြစ်သည်။အစားအသောက်များတွင် ကယ်လိုရီနည်းသော၊ အဆီနည်းသော အစားအစာများ ပါဝင်သည်။ဒါပေမယ့် နေ့တိုင်း ကီဝီသီး ၁ ကီလိုဂရမ် စားဖို့တော့ သေချာတယ်။တစ်ပတ်လျှင်7ကီလိုဂရမ်အနုတ်လက္ခဏာအစားအစာတစ်ခုကတိပြုသည်။ကီဝီသီးနဲ့စားလို့ရတယ်။
အဆီနည်းသော အသားနှင့်ငါးမျိုးကွဲများ (ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်မပါဘဲပြုတ်);
အဆီနည်းသော နို့ထွက်ပစ္စည်းနှင့် အချဉ်ဖောက်ထားသော နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊
စီရီရယ်နှင့် ကောက်နှံများ (နောက်ထပ်ထုတ်ကုန်အားလုံး၏ 50% ပမာဏ);
ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံများ (အာလူး၊ ပဲ၊ ပဲမှလွဲ၍)။
ဂျပန်အစားအစာသည် ၁ ပတ်အတွင်း အနုတ် ၅ ကီလိုဂရမ် ပေးသည်။သူမ၏ အစားအသောက်များတွင် အချို၊ ဂျုံမှုန့်၊ အငန်နှင့် အဆီများကို လုံးဝမပါဝင်ပါ။ပြုတ်ထားသော အဆီနည်းသော အသားများနှင့် ငါးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ပြုတ်ဥများ၊ ပန်းသီးများ၊ သစ်တော်သီးများ၊ လိမ္မော်သီး၊ ကောက် croutons၊ ကော်ဖီ၊ အဆီနည်းသော နို့ထွက်ပစ္စည်းများကို စားရန် ခွင့်ပြုထားသည်။
လွန်ကဲသော အစာများ7ရက် အနှုတ်7ကီလိုဂရမ် မကြာခဏ အသုံးမပြုသင့်ပါ။ထိုနည်းလမ်းများသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကြီးမားသော ဖိအားတစ်ခုဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်၊ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန် အမြန်နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုသည့် အကြိမ်ရေသည် ခြောက်လတစ်ကြိမ်ထက် မပိုသင့်ပါ။
တင်းကျပ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို ဂရုတစိုက်နဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း လုပ်သင့်ပါတယ်။ပုံမှန်အစားအစာကို ရုတ်တရက်ပြန်သွားရင် ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပေါင်ကို ချက်ချင်းရလာပါလိမ့်မယ်။အစားအသောက်ကို စွန့်စားတဲ့အခါ အဆီနည်းတဲ့ အစားအစာတွေ ပါဝင်သင့်ပါတယ်။သေးငယ်တဲ့ အပိုင်းလေးတွေနဲ့ မကြာခဏ ဆက်စားဖို့ လိုပါတယ်။အစားအစာတွေကို ရေနွေးငွေ့၊ ဖုတ်တာ ဒါမှမဟုတ် ပြုတ်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။
သင်အကြိုက်ဆုံးအစားအစာမီနူးတစ်ခု (ကြက်သား၊ ဒိန်ချဉ်၊ အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၊ ငါး) ကို၎င်းတို့၏အဆီနည်းသောအမျိုးများကိုရွေးချယ်ရုံဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။အစားအစာပြီးနောက်ပထမပတ်တွင်ပရိုတိန်းထုတ်ကုန်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းချိုများ၊ အသုပ်များ၊ ဒိန်ခဲ၊ အဆီနည်းသောဟင်းရည်များကိုတဖြည်းဖြည်းမိတ်ဆက်သင့်သည်။တစ်နေ့တာ စားသောက်နေစဉ်အတွင်း တူညီသော အစားအစာဖြင့် ချန်ထားသင့်သည်။
မိုနိုအစားအသောက်ကို အသုံးပြုပါက အစားအစာ အရေအတွက်ကို တဖြည်းဖြည်း တိုးမြှင့်သင့်သည်။ပထမရက်သတ္တပတ်တွင် အစားအစာ နှစ်မျိုးထက် ပိုမစားဘဲ အစားအစာများအတွင်း စားသုံးခဲ့သော ဟင်းလျာအသစ်များကို ပေါင်းထည့်ပါ။ထို့ကြောင့် တစ်ပတ်မှ နှစ်ပတ်အတွင်း ပုံမှန်အာဟာရသို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်သွားနိုင်သည်။
တစ်နေ့လျှင် ရေသန့် ၂ လီတာအထိ သောက်ပါ။ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော ထုတ်ကုန်များကို ဖယ်ရှားရန်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်၏ ယေဘူယျအခြေအနေကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် လိုအပ်ပါသည်။အစာရှောင်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို ဖြတ်တဲ့အခါ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာ အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။မနက်ခင်းလေ့ကျင့်ခန်း၊ ရွရွပြေးတာ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးသင်တန်းတွေကနေ စပြီး ဝန်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးနိုင်ပါတယ်။အစားအသောက်များတွင် ကယ်လိုရီပါဝင်မှုကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့သည် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကို တိုးမြင့်စေပါသည်။
ဥပုသ်ရက်များကို တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ် စီစဉ်နိုင်သည်။အစားအသောက်ကို ဖြတ်ပြီးနောက် ပါးလွှာရုံသာမက ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး၏ ကျန်းမာရေးကိုလည်း ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် မှန်ကန်စွာ စားသောက်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
အစာမစားဘဲ တစ်ပတ်လျှင်7ကီလိုဂရမ် ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသလား။
အစားအသောက် မပင်ပန်းဘဲ မြန်မြန် ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချခြင်းသည် လူများစွာ၏ အိပ်မက်ဖြစ်သည်။ပိန်ပိန်ပါးပါးပုံစံကို လိုက်ရှာရင်း၊ အချို့က ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချရန်အတွက် ဆေးပြားများ သို့မဟုတ် အထူးလက်ဖက်ရည်များ စားသုံးကြသည်။၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ခန္ဓာကိုယ်၏ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်စေရန် ရည်ရွယ်သည် သို့မဟုတ် ဝမ်းနုတ်ဆေး အာနိသင်ရှိသည်။၎င်းသည် ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းကို ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေသော်လည်း ၎င်းသည် ခန္ဓာကိုယ်အဆီများကို ဖယ်ရှားနိုင်မည်မဟုတ်သည့်အပြင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
အစာမစားဘဲ တစ်ပတ်လျှင်7ကီလိုဂရမ်ကျစေမည့်နည်း။
သင့်မီနူးကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ - အဆီများသောအစားအစာများ၊ ကြော်ထားသောအစားအစာများ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ၊ ဆား၊ ငံပြာရည်များ၊
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဖြည့်စွက်စာထည့်မယ့်အစား ဆာလောင်တဲ့ခံစားချက်အနည်းငယ်နဲ့ စားပွဲကို ထားခဲ့သင့်တယ် (အစာတွေ စုပ်ယူလာပြီး စားချင်စိတ်တွေ ပျောက်သွားမှာပါ)။
တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်၊ သင်သည် အစာရှောင်သည့်နေ့များကို စီစဉ်နိုင်သည် (အလုပ်တွင်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန် စနေ၊
တီဗီ သို့မဟုတ် ကွန်ပြူတာရှေ့တွင် ပျင်းသောကြောင့် မစားပါနှင့်။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု (မနက်ပိုင်းလေ့ကျင့်ခန်း၊ ကြံ့ခိုင်မှု၊ ရွရွပြေးခြင်း၊ ကခြင်း၊ ယောဂစသည်ဖြင့်)။
အပြုသဘောဆောင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အနားယူမှုကို မမေ့ပါနဲ့။
7 ရက်တာအရေးပေါ်အစားအစာသည်ကယ်လိုရီနှင့်အစားအစာစားသုံးမှုကန့်သတ်ချက်အပေါ်အခြေခံသည်။အဆီများနှင့် ကြွက်သားထုထည်များ ဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျသွားသော်လည်း အဆီအနည်များကို လက်တွေ့တွင် မလောင်ကျွမ်းနိုင်ပါ။အစာစားချိန်အတွင်း အစာငတ်ခံခြင်းမရှိဘဲ လုပ်ရန် အရေးကြီးပြီး အပြင်ထွက်သည့်အခါ အဆီများပြီး ကယ်လိုရီများသော အစားအစာများကို မစားပါနှင့်။ဆုံးရှုံးသွားသော ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းလိုပါက သင့်လျော်သော အာဟာရဖြစ်စေသော အလေ့အထတစ်ခု ဖြစ်လာစေရမည်။